Maalinta: Ogast 15, 2019
Sidee loo gaaraa Fenerbahce, Galatasaray, Kasimpasa, Besiktas iyo Basaksehir garoonada Istanbul qaab fudud iyo dhaqsaha badan? Aad bay u fududahay in la aado ciyaaraha Super League ee lagu ciyaaro Istanbul iyadoo la raacayo xargaha nidaamka tareenka ee Metro Istanbul. Kirazlı-Başakşehir / Metrokent [More ...]
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa sheegay in barnaamijyada tababarka aasaasiga ah ee badaha hiwaayadda loo bilaabay in lagu bixiyo si lacag la’aan ah si dadka loogu jeediyo badda si ay awood ugu yeeshaan inay arkaan wax ka baxsan. [More ...]
Demreliler ayaa helay baska. Degmada Antalya ee Magaalo-weynaha ayaa sii wadata taageerada ay siiso degmooyinka iyo magaalooyinka dhex maraya waxqabadyadeeda iyada oo bartilmaameed magaalo ka heli kara. Madaxweynaha Muhittin Böcek ayaa dhowaan booqday Demre [More ...]
Waqtiga Iskaashiga Caalamiga ah ee Izmir
Duqa magaalada İzmir Tunç Soyer wuxuu la kulmay safiirada, qunsulka, qunsuliyada iyo qunsulka sharafta ee İzmir iyadoo la raacayo hadafka la qorsheynayo mustaqbalka magaalada ay la leeyihiin dadka reer İzmir. Shirka weyn, dalxiisayaasha Izmir [More ...]
Railways Yukreeniyaan Ukrzaliznytsia, oo qorsheynaysa laba koror oo qiimaha tikidhada ah ee 2019, ayaa mar kale ku dhawaaqday baahida loo qabo in la kordhiyo canshuurta rakaabka ee rakaabka. Madaxweynaha Ukrzaliznytsia Yevgeny Kravtsov, howlaha Ukrzaliznytsia hada faa iido ayey leeyihiin [More ...]
Kiiska Magdhawga Magdhawga TCDD 103
13 Diseembar 2018 isku dhacay tareen xawaare sare leh oo kuyaala Ankara Konya 9 dad ayaa ku dhintey waxaana dadka 86 ay ku dhaawacmeen shil tareen Turan Berk Çetin TC Devlet [More ...]
Socdaalka Marmaray iyo Başkentray
Xulashada koowaad ee dadka raba inay u guuraan guryahooda ee Istanbul waa u dhawaanshaha wadooyinka gaadiidka dadweynaha. Gaadiidka dadweynaha dhexdeeda, isku-dhawaanshaha khadadka tareenka, xulashooyinka Metrobus iyo Marmaray ayaa inta badan lagu qiimeeyaa Sida uu sheegayo Duygu Erdoğan oo ka socda Milliyet [More ...]
Shil ka dhacay Isgoyska Heerka ee Türkoğlu, 5 Dhaawacmay
Dadka 5 ayaa ku dhaawacmay ka dib markii tareenku ku dhuftay gaadhiga heerka isgoyska ee degmada Türkoğlu ee Kahramanmaraş. Marka loo eego macluumaadka la helay, Adana-Elazığ tareenka xamuulka xamuulka ee xNUMX safarka, degmada degmada Beyoğlu Kahramanmaraş-Adana wadada [More ...]
Agaasinka guud ee MASKI, xarunta degmada Selendi waxay fulisay kun mitir murabac laba jibaaran shaqadii 110. Kuxigeenka Maareeyaha Guud ee MASKİ Erman Aydınyer wuxuu sidoo kale la kulmay dadaalka dadaalka badan ee Cengiz Ergün, Duqa Magaalada Caasimadda. [More ...]
Duullimaadyada 710 iyo 710S waxaa bixiya degmada Kocaeli Metropolitan District. Laba degmo oo u adeegaya sidii buundo [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo maalgelin weyn ku sameysay gaadiidka, waxay sii wadaysaa hirgelinta mashaariic muhiim ah si loo fududeeyo isu socodka dadka lugeynaya iyo sidoo kale socodka gaadiidka. Deegaanka Izmit degmada Kabaoglu Degmada Prof.Dr. Dr. Baki [More ...]
Iyada oo laga soo wajahay dhowr iyo toban dhibaatooyin ka socda dhismaheeda ilaa furitaankiisa iyo hawlgalkeeda, sheegashada ku saabsan Madaarka Saddexaad ayaa mar kale la soo baxaya dhacdooyinka mar-mar dhaca. Deegaanka seddexaad markii ugu horeysay 2009 [More ...]
Maanta taariikhda: 15 August 1888 Deutsche Bank
Taariikhda 15 Agoosto 1885-Mersin-Adana dhismaha tareenka ayaa bilaabay dab. 15 Agoosto 1888 Maareeyaha Guud ee Bangiga Deutsche Siemens wuxuu codsi u soo gudbiyay xafiiska arrimaha dibedda ee Jarmalka wuxuuna codsaday mowqifkiisa ku aadan heshiiska isgaarsiinta ee Anatolian Railway. Arimaha Dibadda Jarmalka 2 [More ...]